इद्लिबमा हिंसा बढेपछि टर्की र रुसबीच युद्धविरामको सहमति - नेपालबहस
इद्लिबमा हिंसा बढेपछि टर्की र रुसबीच युद्धविरामको सहमति
| १४:५७:०५ मा प्रकाशित
२३ फागुन एजेन्सी । रुस र टर्कीबीच उत्तरी सिरियाको इद्लिब प्रान्तमा शुक्रबारबाट युद्धविराम लागू भएको छ । मानवीय सहायताको खाँचो पर्नसक्नेगरी आपतकाल फैलाउने र उनीहरूका सेनाबीच झडप हुने डर बढाउने अवस्था रहेकाले पछिल्लो समयमा जारी रहेका झडपहरुलाई पनि रोक्ने उद्देश्यले शुक्रवारदेखि युद्धविराम लागू भएको जनाइएको छ ।
सिरियाको उत्तरपश्चिमी प्रान्त इद्लिबमा हिंसा बढेपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र टर्की समकक्षी रेसेप तायिप एर्डोगानबीच यो सम्झौता भएको समाचारमा जनाइएको छ । उत्तरपश्चिमी सिरियामा आङ्कराले मस्कोको समर्थनमा रहेका सरकारी सेनासँग संघर्ष गरिरहेका थिए । यस प्रान्तमा जारी रक्तपातको कारण करिब १० लाख नागरिक आफ्नो घर छोडेर भागेका छन् । जारी हिंसाको कारण दर्जनौं टर्की सेना मारिएका बताइएको छ । पुटिन र एर्डोगानबीच ६ घण्टा भन्दा बढी समय वार्तापछि शुक्रबार मध्यरातदेखि युद्धविरामका लागि सहमति भएको बताइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले यो सम्झौताले पश्चिमी सिरियामा नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दुश्मनीलाई तत्काल र चिरस्थायी समाप्तिमा पु¥याउने आशा व्यक्त गरेको उनका प्रवक्ताले बिहीबार प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा बताए । मध्यराति भन्दा केही समयअघि मात्र बम विष्फोट भएको सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युम्यान राइट्सले जनाइएको छ । युद्धविराम लागू भएपछि यस क्षेत्रमा सामान्यतया शान्त रहेको पनि अब्जरभेटरीले जानकारी दिएको छ ।
बेलायतस्थित प्रमुख कार्यालय रहेको यस मानवअधिकारवादी समूहले रुस र सिरियाली हवाई हमलाहरू रोकिएको जनाएको छ । तर इद्िलबको सीमावर्ती अलेप्पो र हमाको इलाकामा जिहादीहरूको नियन्त्रणमा रहेको इलाकामा विद्रोही समूहको स्थितिमा सिरियाली सरकारी सुरक्षाबल गोलाबारी गरेको जनाइएको छ ।
सिरियाको नौ वर्षको गृहयुद्धको क्रममा विद्रोही गढ इद्लिबको अवस्था नाजुक भएको थियो । किनकि पहिलो पटक राष्ट्रपति बसर अल असादको फौजको बिरूद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण भएको थियो । संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा यस सम्झौताले इद्लिबमा लडाई समाप्त गर्ने राम्रो आधारको रुपमा काम गर्ने राष्ट्रपति पुटिनले बताए ।
टर्कीले दमासकसको कुनै पनि हमलाबिरूद्ध आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसँग बदला लिने अधिकार सुरक्षित गरेको एर्डोगानले बताए । सम्झौताले उत्तरी सिरियाको कि एम४ राजमार्गमा सुरक्षा मार्ग पनि निर्माण गर्नेछ, जहाँ टर्की र रूसी सेनाले मार्च १५ देखि संयुक्त गस्ती सुरु गर्नेछन् ।
सिरियामा सन् २०११ को मार्च महिनापछि यहाँका राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिानामा माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन केही समयपछि गृहयुद्धमा परिणत भयो । यस युद्धमा सो समयदेखि हालसम्म ३ लाख ७० हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
लाखौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् भने अरु लाखौं आफ्नै देश र छिमेकमा पर्ने देशहरुमा शरणार्थीका जीवन विताइरेहका छन् । यसैक्रम सिरियामा जारी युद्धको कारण करिब ३६ लाख व्यक्ति टर्कीमा शरणार्थी जिवन यापन गरिरहेका छन् ।
संस्थागत आइसोलेशनमा बस्नै मान्दैनन् संक्रमितहरु ३ दिन पहिले
शान्तिसुरक्षामा खटिने प्रहरी अक्सिजन सिलिन्डर खोज्दै ७ दिन पहिले
सरकारको सफलता नेदख्ने तर एकाध कुरामा असफल हुँदा बढाइचढाइ गर्ने ? ५ दिन पहिले
ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बस्दै ४ हप्ता पहिले
मिथिलाञ्चलमा आजदेखि चैती छठ शुरु ४ हप्ता पहिले
घरको छतमा गरिएको तरकारी खेती १ हप्ता पहिले
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवरण बुझाउने समयावधि थप ४ हप्ता पहिले
कोरोनाका कारण निरालाको निधन २ हप्ता पहिले
संक्रमणबाट बाँके र रुपन्देहीमा थप सात जनाको मृत्यु १ हप्ता पहिले
वैशाखयता बाढी, पहिरो र चट्याङबाट १८१ को मृत्यु, ५१ अझै बेपत्ता ! १० महिना पहिले
आज थारु समुदायले माघी पर्व धुमधामका साथ मनाउँदै १ वर्ष पहिले
प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाको उच्च जोखिममा सिन्धुपाल्चोक १० महिना पहिले